DAAWO: Xaggee ku dambeeyey Madaxweynaha Puntland, Ma dhaba-baa in uu xanuunsan yahay?
September 8, 2019 NEWS 0
DUBIA(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa safar ugu maqan dalka dibadiisa, waxaana maalmihii u dambeeyey uu kusugnaa dalka Imaaraatka Carabta, isagoo horey u soo maray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya oo ay ku kulmeen Madaxweyhnihii xukunka uga horeeyey Cabdiweli Gaas.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kulamadii u dambeeyey ee madaxweynaha Puntland kula yeeshay magaalada Dubia, qaar kamid ah madaxda Shirkaddaha maalgashiga ku sameeya Puntland oo ay ka mid tahay shirkada DP WORLD.
Warsidaha PTIMES wuxuu ogaaday in Madaxweynaha Puntland uu dhawaan dib ugu laaban doono mandiqadaas, ka hor maalmaha uu furmayo shirka maalgashiga oo ay ka wada qeybgalayaan dhinacyo kala duwan.
HALKAAN KA DAAWO FAAHFAAHINTA
Wararku waxay sheegayaan in Madaxweynaha safarkiisa sidaas oo kale ay qeyb ka ahayd arrimo caafimaad oo isaga u gaar ah, kuwaas oo maalmihii u dambeeyey u joogay dalka Imaaraatka Carabta.
Xogo kala duwan oo la faafiyey kuna wajahnaa in ay halis tahay xaaladda caafimaad ee Madaxweynaha Puntland ayaa ahaa kuwa la been abuuray, sidda ay ogaatay Puntlandtimes, waxayna ogaatay in ay jirtay baaris caafimaad oo uu sannad kasta maro Madaxweynaha Puntland.